Izindaba - Izihlungi zamehlo zaselebhu
Ama-washer wamehlo elebhu
Kungakhathaliseki ukuthi kusezikoleni noma ezibhedlela, kudingeka ama-laboratories, futhi izindaba zokuphepha zibaluleke kakhulu futhi ziyakhathazeka. Izinyathelo eziphuthumayo zibaluleke kakhulu lapho amakhemikhali efuthwa ngephutha emzimbeni noma emehlweni. Ukuhlanza iso kwelebhu nakho kuyimishini yokuphepha ebalulekile. Njengoba kuyimishini yokuphepha ebalulekile, ukumiswa kwe-eyewash yelabhorethri nakho kufanele kuhlolwe ngokuqinile.
Ukuhlanza iso kwelebhu ngokuvamile kwenziwa ngensimbi engagqwali ipayipi lensimbi elingenamthungo, bese ubheka ukuthi ilabhoratri yi-chloride namanye amakhemikhali ayingozi. Uma ukugqwala kwamakhemikhali kukhulu, indawo engaphandle ye-eyewash kufanele ifakwe nge-ABS noma ukwelashwa okusebenza kahle, ukuze i-eyewash yelabhorethri ikwazi ukumelana nokugqwala futhi nempilo yesevisi ye-eyewash iyandiswa. I-laboratory washer ingasetshenziselwa ukuhlanza ubuso, izingilazi, intamo, izingalo, njll. Uma ufuna ukugeza wonke umzimba wesherso lamehlo, ungakhetha i-eye washer ehlangene, uhlanze ngokuphelele.
Umkhiqizi weBohua eye wash wedivayisi ngokuhambisana ngokuqinile nedivayisi ejwayelekile yaseMelika yokukhiqiza iso, esebenza ngokukhethekile kokukhiqizwa kwensimbi yokugeza iso iminyaka engaphezu kweyishumi, ngentuthuko, ukuklama, ukukhiqiza, ukuthengisa njengomunye wabakhiqizi. Ngenqwaba yezimboni zamakhemikhali ezinokubambisana, ngenxa yekhwalithi yomkhiqizo nangemva kokuthengiswa kwenkonzo, iwine udumo oluphakeme lwekhasimende. Dizayina futhi uthuthukise inani lamadivayisi we-eyewash, asetshenziselwe inani elithile lobunikazi lobuchwepheshe. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngemikhiqizo ye-Bohua eyewash, ungaxhumana nathi!